March 7, 2021 1330
काठ’माडौ । केही समय अगाडि सामा:जिक सन्जाल र टिकटकमा एउटा श्री’मानका बारेमा धेरै चर्चा परिच’र्चाहरु चुलिए सबैले श्रीमान भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि भने र धेरैले त यस्तै श्रमिान पाए जिन्दगी सुखी र खुशी हुन्थ्यो भनेर पनि भने । हो उनै महा’न श्रीमान बिनोद खडका जो आज हामी उनको र उनकी श्रीमती अनिता खडकाको पहिलो जिबनक’हानी गित लिएर आएका छौ ।
गुल्मी पिपल:धाराका बिनोद केही समय देखि श्रीमती अनिताको ब्रेन हयाम्रेज जस्तो रोगस“ग लडनको लागि धेरै प्रयास गरे र अहिले धेरै सुधार आएको छ ।लेक’साइड टिभी र ब्लु स्काई ने:पालको पहलमा सुरु भएको उनकी श्रीमतीको उपचारले अहिले सही स्थान पाएको र निको भएको छ बिस्तारै बिस्ता’रै र यही स:मयमै उनको लागि त्यही मिडि’यालेनै पहिलो गित बनाईदिएको छ ।
सायद यो जो:डीलाई नचि’न्ने त कमै होलान त्यसैले उनको बास्तकित र सत्य कथा उतारिएको गितको बारेमा कुरा गरौ । जस्मा स्वर दिनुभएको छ रेशम निर्दोष र सुनिता बुढाले भने श:ब्द नेत्र अर्र्यालको छ । यसैगरि आकर्षक फ्रेम:मा खिचेका छन राजेश घि’मिरेले जस्ला’ई बुटवल गुल्मी र पाल्पामा खिचिएको थियो । जस्मा बिनोद भण्डारी’को निर्देशन र महेन्द्र भण्डारीको लय एरेन्ज रहेको छ । यसलाई सम्प’दान भने मनोज कार्कीले गरेका छन भने यो गित’मा सम्पुर्०ा लगानी सबिन क्षेत्रीको रहेको छ,।
Prevकिसानले दुध बेच्नकै लागि ४८ करोडको हेलिकप्टर किने, खेतमा हेलिप्याड बनाए..
Nextविप्लव समूहले अन्तरिम संयुक्त सरकारका साथै राजा’वादीसँग पनि छलफल गर्ने…!
साइकल चोरेरै भक्तपुरमा बनाए तीन तले घर, यिनको चोर्ने शैली थाहा पाउँदा प्रहरी पनि चकित !
राजु परियारले आशालाई कान्छी बनाउछु भन्दा मच्चियो हंगामा (हेर्नुहोस कडा दोहोरी)